MW Farmaajo oo khudbad ka jeedinaya Shir Madaxeedka Afrika -News and information about Somalia
Home News MW Farmaajo oo khudbad ka jeedinaya Shir Madaxeedka Afrika
Gelinka dambe ee Maanta oo Isniin ah ayaa la filayaa in la soo geba-gabeeyo Meertada 33-aad ee Shir Madaxeedka Midowga Afrika oo ka socda magaalada Addis-ababa ee dalka Itoobiya.
Shirkaan waxaa Soomaaliya u metelaya Wafdi uu hoggaaminayo Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo,waxaana looga hadlay qodobo dhowr ah oo ku saabsan xaalada kajira dalalka Afrika sigaar ah caqabadaha kajira wadanka Koonfurta Suudaan.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa lagu wadaa in uu Maanta shirkaasi ka jeediyo khudbad uu kaga hadli doono guulaha ay gaartay Soomaaliya, muddadii la soo dhaafay, caqabadaha ku xeeran iyo fursadaha u baahan in sida wadajirka ah looga faa’iideysto qaarad ahaan.
Sidoo kale Madaxweyne Farmaajo ayaa halkaasi waxaa uu kasii wadi doonaa kulamo kala duwan oo uu la qaadan doono Madaxda ka qeyb galeysa Shir Madaxeedka wadamada Afrika ee ka socda Magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya.
Previous articleKulamo iska soo horjeeda oo ka soconaya Magaalada Dhuusamareeb
Next articleLaba daran mid dooro oo soo wajahday ganacsatada Degmada Beled Xaawo